घरमा सँधै सुख शान्ति बनाई राख्न यी ८ कुरामा दिनुहोस् !! | सुदुरपश्चिम खबर
घरमा सँधै सुख शान्ति बनाई राख्न यी ८ कुरामा दिनुहोस् !!
यी ८ कुरामा ध्यान दिुनुस् घरमा सँधै सुख शान्ति हुन्छः१) घरमा रहेको पुजा स्थल वा मन्दिरमा नियमितरुपमा देवी देवताको तस्विर वा मुर्तिमा पुजा गर्नुस् यसले वास्तु दोष नष्ट गरिदिन्छ र सकारात्मक उर्जा पैदा गर्छ ।
भगवानलाई चढाइ ओइलाएको फूल नदी वा तलाउमा किन बगाउन हुदैन ?
के जति पढे पनि याद नै हुँदैन ? यस्तो छ उपाय !!
२) घरको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । घरमा फोहोर जम्मा हुँदा त्यसले नकारात्मक उर्जा पैदा गर्छ।३) घरमा कोठाको ढोकातिर पर्ने गरी खुट्टा राखेर सुत्नु हुँदैन । यो बास्तु नियम विपरित मानिन्छ।
४) घरमा सर९सफाइ गर्दा पानीमा थोरै नुन मिसाएर गर्नुस् । यसो गर्दा घरमा सकारात्मक उर्जा जम्मा हुन्छ।५) घरमा परिवारको तस्विर राख्दा दक्षिण९पश्चिम दिशामा राख्नु शुभ मानिन्छ । यो दिशामा परिवारका सबै सदस्य भएको तस्विर राख्दा घरमा प्रेम बढ्छ ।
६) भान्सामा आगो र पानीकोबिचमा केही दुरी हुन जरुरी छ । अग्नि तत्व पानी तत्व आपसमा विरोधी मानिन्छन् । यसैले एक अर्काबाट टाढा राखिएमा सकारात्मक उर्जा पैदा हुन्छ ।७) घरको उत्तर दिशामा धातुका सिक्काले भरिएको कचौरा राख्दा शनिको प्रभावले घरुमा सुख शान्ति हुने मानिन्छ। उत्तर–दक्षिण दिशा घरको स्वामिको दिशा मानिन्छ ।
८) घरको छतमा पानी ट्याङ्की राख्ने चलन सबैतिर हुन्छ । तर यस्तो ट्याङ्की छतको दक्षिण–पश्चिम दिशामा हुनु पर्ने बास्तुबिदको भनाइ छ । अन्य दिशामा भएको पानी ट्याङ्की अशुभ मानिन्छ।
जति पढे पनि याद नै हुँदैन ? यस्तो गर्नुहोस्
रामनवमी पर्व आज देशभरि श्रद्धा र भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइँदै !!
गणेश भगवानको पुजा गर्दा यी ११ मन्त्र जप्नुहोस् मिल्नेछ शुभ लाभ !!
व्रत सकिएपछि के के खाने, के नखाने ?
शुक्रबारको दिन यसरी बस्नुहोस् , सन्तोषी माताको ब्रत ? मिल्नेछ लाभ !!
हातमा तामाको औंठी लगाउँदा हुन्छन्, यस्ता फाइदा !